Kulankan oo ka dhacay Baar Liido ayaa waxaa soo agaasimay ururrada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxsaa saraakiishii lagu casuumay looga dhageystay habka ay u dajiyeen qorshahan iyo sida looga qayb-qaadan karo xasilinta dalka.
Saraakiishii kulankaan ka qaybgalay ayaa waxaa ka mid ahaa: Jen. Maxamed Saalax, Jen. Axmed Maxamed Maxamuud (Carab), Inj. Cumar Cabdullaahi Handi, Jen. Axmed Maxamed Xuseen, Jen. Xasan Maxamed Cali (Xasan Kornayl), Jen. C/weli Sheekh Maxamed iyo Jen. Cabdinaasir Maxamed (Indho-qarsho).